Mareykanka oo sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen Jubbada Hoose ku dileen hal dagaalyahan oo Al-Shabaab ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen Jubbada Hoose ku dileen hal dagaalyahan oo Al-Shabaab ah
September 3, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in maanta oo Talaado ah ay duqeyn ka geysteen deegaanka Jilib ee gobolka Jubbada Hoose.
“Wakhtigan, waxaan ogaanay in duqaynta ay dishay hal argagixiye.” AFRICOM ayaa sidaas bayaan ku sheegay.
Waxay intaas ku dareen in aysan jirin wax shacab ah oo dhibbaato kasoo gaartay duqeyntaas.
AFRICOM ayaa sheegtay in ay sii wadi doonaan duqeymaha ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya si cadaadis loo saaro ururarada argagixisada.
“Waanu sii wadi doonaa saarista cadaadiska shabakadaha argagixisada ah iyada oo isla wakhtigaas saaxiibadayada Soomaaliya ay horumarka ka samaynayaan dhulka,” sidaa waxaa yiri Janaraal William Gayler, oo ah agaasimaha howlgalada ee AFRICOM.
September 18, 2019 Labo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka fuliyay Jubbada Hoose